ကျောက်ခဲဟင်းချို ချက်နည်း ပဒေသာကျမ်းနှင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ကျောက်ခဲဟင်းချို ချက်နည်း ပဒေသာကျမ်းနှင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ
ကျောက်ခဲဟင်းချို ချက်နည်း ပဒေသာကျမ်းနှင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ
Posted by မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု on Nov 29, 2010 in Computers & Technology | 12 comments
လူတစ်ယောက်ရဲ ့အဖြစ်ချင်ဆုံး ရည်ရွယ်ချက်ဟာ (လောကီနယ်ထဲမှ) အထွပ်အထိပ်ရောက်လိုမှု ့ပါဘဲလို ့ဘယ်စာအုပ်မှာ ဘယ်သူလဲမသိဘူး ရေးထားတာ ဘယ်တုန်းကလည်းမသိဘူး ဖတ်ဘူးတယ် ဟုတ်မှာဘဲလေ လူတွေတိုင်း လူတွေတိုင်း ကြီးချင်ကြတာဘဲ ရာထူး :)ဟုတ်ဘူးလားနော? ဘုရားလူကြီး ရပ်ကွက်လူကြီး အခြောက်ကြီး ဂန္ဒူးကြီး ဘာဘူကြီး စစ်ဗိုလ်ကြီး ဆရာဝန်ကြီး သရဲကြီး မျောက်ကြီး နွားကြီး ကြီးခြင်တာကြီး ထိုထိုသောကြီးမှန်သမျှထည်းမှာမှ ကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဟာ ဆိုရင်ဖြင့် အိုးသကြီး ဟူမူ၍ ကြီးတစ်ကြီး အပါဝင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ ဟင်းချက်နည်းများအား ဒေါ်လာရမည်ဆိုပါသဖြင့် မှတ်မိသမျှကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတော့သတည်း။
ဝတ္ထုတစ်အုပ်ထည်းက ဇာတ်ကောင် တစ်ယောက်ပြောတာ ဘာရယ်မဟုတ် အမှတ်ရဘူးတယ် ( ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး စားကြတာဘဲ ဒါကြောင့် အစားကောင်းကောင်း ချက်ပြုပ်တတ်ရင် မငတ်ဘူး) ဟုတ်မယ်ထင်တယ်နော်။ ဒါကြောင့်လည်း ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေးတစ်ခုကို ဒေါ်လာရရန်အလို ့ငှာ ။
ကျောက်ခဲဟင်းချို ဆိုတဲ့အတွက် ကျောက်ခဲ တော့မဖြစ်မနေပါရပါမည် (အုပ်နီဂဲ ဂဝံ ဂဲ အစရှိသည့် ပဲ့ထွက်တတ်သော ကျောက်ခဲများ မဖြစ်စေရပါ ) (ဥတုဘောဇနသင်္ခ ါရ ကျမ်း၌ ကျောက်ခဲသည် မာ၏ မပျော့ ရုပ်ရုပ်လုပ်၍ ခဲဖြင့်ထုလျှင် အကြီးအသေးပေါ် မူတည်၍ ထိခိုက်မှု ့ကွဲပြား၏ (ကျောက်ရောဂါကို ပျောက်စေ၏ :)) ဟူသော။
ပါဝင်ရမည့် ပစ္စည်းများမှာ အိုးနှင့် လိုက်ဖက်သော သန် ့စင်သော ကျောက်ခဲတစ်လုံး (အိုးငယ်ငယ်ထဲကို ကျောက်ခဲကြီးကြီးထည့်ရင်တော့ ဘယ်မျှမလဲနော) ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ ဂျင်း ငရုပ်ကောင်းမှုန့်အချိုမှုန့်ဆား ငန်ပြာရည် (မကြိုက်ရင်မလို) ဟင်းခတ် အနေနှင်ကတော့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သားငါးကြော်များ နှင့် နံနံပင် ကြက်သွန်မိတ် စသည်တို ့ဖြစ်ကြပါသည်။
ဦးစွာပထမ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ နှင့် ဂျင်းတို ့ကို အလိုရှိသလောက် ဆီသပ်ပါ ပြီးလျှင် ရေအလိုရှိသလောက် ထည့်ပါ ပြီးလျှင် သန် ့စင်ပြီးသော ကျောက်ခဲကို ထည့်ပါ အချိုမှုန့်ဆား ငန်ပြာရည် စသည်တို ့ကို အလိုရှိသလိုထည့်ပြီး ဆူအောင်ချက်ပါ ပွက်ပွက်ဆူလာလျှင် ငဖယ်ကြော် ငရံ ့ကျော် စသည် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သားငါးကြော်တို့ကို ထပ်ထည့်ပါ နံနံပင် ကြက်သွန်မိတ် တို ့ကို ပါးပါးလှီး၍ ထည့်ပါ ငရုပ်ကောင်းမှုန့်အလိုရှိသလောက် ထည့်ပါ ဆူလာလျှင် မြည်းကြည့် အငန်အပေါ့ ကိုယ့်သဘော ဒါပါဘဲ
အထက်ပါအကြောင်းအရာဟာ ဆိုရင်ဖြင့် ကျောက်ခဲ ဟင်းချို ချက်နည်း ကျမ်းပဒေသာ ကြီးပင် ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ် အကယ်စင်စင်စစ် ကြော်ငြာခြင်သည်မှာ ပုံပါ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများအား လေလံတင်ရောင်းချလိုခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ပြထားသော ပုံ(၁) ဒယ်အိုးမှာ အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ ၏ နန်းတွင်းသုံး မိတ်အင်ချိုင်းနား ရှေးဟောင်း ဒယ်အိုးဖြစ်ပြီး ပုံ ( ၂ ) ငရုပ်ဆုံမှာ မြန်မာအစ ဟု ငြင်းခုန်နေကြကုန်သော စည်တီးလျှင် ရေကြီးသည့် ရန်ပယ် ပိဿနိုး ဘုရင်မ ကိုယ်တိုင် ထောင်းသော ငရုပ်ကျည်ပွေ ့ဆုံ set ဖြစ်ကာ ကျန်ပစ္စည်းများကို မူ ပုံများနှင့် စာတွဲ ၍ ဖော်ပြထားပြီး ထိုပုံ များအား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကူးယူ ရောင်းချခြင်း လုံးဝ မပြုရန် အထူးသတိပေး အပ်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းများအား လက်ရှိ ကော်မတီမှ မကြာမီထုတ်ပြန်ပါမည်။
U$ 500000စတင်လေလံဆွဲပါပြီ…။ …….ကြမ်းခင်းဈေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတာ ထုပ်ပြန်ပေးပါရန်.။
eBay ကနေ လေလံပစ်လိုက်ပါလားခင်ဗျာ။ ဆွဲချင်လွန်းလို့ပါ။
စိတ်ဝင်စားပါတယ်၊ လေလံကြမ်းခင်းဈေးကို သိချင်ပါတယ်။
ခုလိုရှား……….ရှား ပါး………ပါး ကျောက်ခေတ်လွန်တရက်ကပစ္စည်းတွေလေလံပစ်မယ် ဆို ဆွဲဘို့အဆင်သင့်ဘဲဟေး….
ကျောက်ခဲဟင်းချိုပြီးတော့ သံတုံးသံခဲဟင်းနည်း လည်းလုပ်ပါအုံး။
တကယ့်အနုပညာပါပဲ အဟုတ်။ ဘာတွေကိုဘယ်လိုပဲ စီမံပါစေ။ ကျောက်ခဲက ဘာအရသာမှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူ့ဗီဇကပြောင်းလဲ မှာမှမဟုတ်တာ။ မကောင်းတဲ့လူက တစ်သက်လုံး ကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးတာပဲဟာ။ ဒီသဘောကိုသိရင် ချော့ရမှာလား။ ရှိခိုးရမှာလား။ ဆွေးနွေးရမှာလား။ တိုက်ရမှာလား။ ရှင်းနေတာပဲဟာ။
ဦးဂျော်နီ … အိမ်ကို ဧည့်သည်လာမလုပ်တော့ဘူး ။
နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် ဉာဏ်နီ ဉာဏ်နက်တော်တော်များပါလား ။
ကျောက်ခဲဟင်းချို ချက်နည်းတဲ့ စိတ်0င်စားဖို့တော့ကောင်းသား ဦးဂျော်နီကြီး ချက်စားနေကြထင်တယ်
ဟင်းချိုချက်နည်းကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရေးပြထားတယ်နော် …
ပေါက်ကရတို.၏ဘုရင်ကြီး (ကိုပုကကြီးချင်တရ်ဆိုလို. “ကြီး” ထည့်ပေးတာ) ပုပု
ဗိုက်ဆာလို. သံမှိုလက်သုတ်လေးနဲ. ထမင်းစားမလားလို. လုပ်နေတုန်း
ကျောက်ခဲဟင်းချိုလေးများ အပိုလုပ်စားရမလားလို. ဝင်ကြည့်မိတာ
တော်ပီ … စိတ်ဆိုးလို.သံမှိုလက်သုတ်တောင်မစားနိင်တော့ဘူး။ သံခဲဖျော်ရည်ပဲသောက်လိုက်တော့မရ်။
“ဘာတွေကိုဘယ်လိုပဲ စီမံပါစေ။ ကျောက်ခဲက ဘာအရသာမှရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။”
တကယ်ပဲ ဒီလိုတွေးပီး ဒီလိုရေးတယ်ဆိုရင်တော့ ~~~~ @_@